Home - AB AM M YEMEN
O bibiri ụlọ
ọtụtụ puku ndị mmadụ na-akwaga ebe ahụ
.Zọ, oké osimiri, elu igwe
Agụụ na ọrịa dị ọtụtụ nde
Enweghị nri na ọgwụ
Ọtụtụ narị puku
Merụrụ ma gbuo ndị nkịtị
Biko họrọ asụsụ gị
A nchịkọta nke Yemen agha
na 2015 na mgbe Yemen onyeisi oche arụkwaghịm na ya ụzọ mgbapụ si Yemen, ihe ahaghị agha megide Yemen e jụrụ site Saudi Arabia na United Arab Emirates. European na American ọchịchị mere jọgburu onwe mpụ megide-apụghị ịzọ onwe Yemeni ndị mmadụ na nke ọtụtụ puku ụmụaka na ndị nkịtị e gburu, site na-ere ngwá agha na-akwado Saudi Arabia kama na-egbochi na mediating a nke. A mpụ na-ọ bụghị nanị na-ejedebeghị na agha ọgụ ma Saudi Arabia gbara gburugburu ụwa, ikuku, na oké osimiri na Yemen iji igbochi-uzọ nke ihe oriri na ọgwụ na mba nke nọ n'ihe ize ndụ nke ndụ nke ọtụtụ nde mmadụ. Dị ka akụkọ ndị ahụ si mba òtù, mpụ ndị a abụwo ọdachi kachasị njọ nke mmadụ na iri afọ ole na ole gara aga wee kpatara agụụ ma malite ọrịa dị ka ọgbụgbọ.
Na ntọhapụ nke ozi ọma na ihe oyiyi nke ndị a mpụ na a website, ọ gbalịrị-agwa ndị mmadụ nke a mpụ nke a na-enwekarị boycott nke Saudi-kụziri ozi ọma ụlọ ọrụ, na-akwụsị a ahaghị agha site ngagharị iwe si gburugburu ụwa.
Biko tinye gị email na-na ọhụrụ ozi ọma na-akwado ndị na Yemeni ndị mmadụ
ọzọ ozi ọma
Bụ saịtị ndị mmadụ iji nyere ndị Yemen aka maka mpụ nke Saudi Arabia ma kwụsị njedebe ya nke afọ nke gbuworo ndụ ọtụtụ nde.
IAMYEMEN.COM © 2022 Ikike niile echekwabara.